Ciidamada dowladda iyo Al-shabaab oo madaafiic isku weydaarsaday qeybo ka mid ah Shabeellaha Hoose
Thursday August, 06 2020 - 01:45:14
Friday August 23, 2019 - 09:35:47 in by salman abdi
Wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeellaha hoose ayaa sheegaya in xalay qeybo ka mid ah gobolka madaafiic isku weydaarsadeen ciidamada dowladda iyo Al-shabaab.
Goobjoogayaal ayaa warbaahinta u sheegy in Al-Shabaaby weerar madaafiic ah ku qaadeen saldhiga Ciidamada Dowladda lagu tababaro ee Balli-Doogle, islamarkaana ciidamadii halkaa ku sugnaa dhankooda ku jawaabeen madaafiic.
Sidoo kale waxaa ay wararku intaa ku darayaan in madaafiic laga maqlay saldhigyo kale oo ay ciidamada dowladda kaga sugan yihiin gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan kuwii dhawaan lagala wareegay Al-shabaab.
Garoonka Balli-Doogle ee Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaa ay Saraakiil Mareykan ah ku tababaraan Ciidamada Dowladda Soomaaliya,waxaana dhowr mar weeraro madaafiic ah ku qaaday Al-Shabaab.
Gobolka Shabeellaha Hoose maalmihii ugu danbeeyayba waxaa ka soconaya howlgalo militari oo ay wadeen ciidamada dowladda, gaar ahaan kuwa sida gaar ah u tababaray ee DANAB, kuwaa oo Al-shabaab kala wareegay deegaanno dhowr ah.
04/08/2020 - 09:32:01
03/08/2020 - 13:16:04
Gudoonka golaha shacabka iyo madaxda xisbiyada qaran oo isku raacay in doorashada waqtigeeda laqabto
29/07/2020 - 09:57:49
Xiisad Hirleh Oo ka soo dhex cusboonaatay Turkiga iyo Gariiga+Arimaha La Isku Maan Dhaafay.
24/07/2020 - 11:01:18